BUHARI NYERE NDI ORU NCHE AKA IKWUSI IGBU MMADU
Previous AGHA AGHA NA-AGBAGHASI EBUBO NA US, CHINA
Next IHE NKIRI NDỊ NKIRI NOLLYWOOD NA-ABATA NA HOLLYWOOD
Onye isi Muhammadu Buhari gwara ndi oru nche iji gbochie igbu mmadu na ndi omekome n’ofe Naijiria.
O nyekwara ndị ụlọ ọrụ ahụ iwu ka ha nwekwuo ike ime atụmatụ ha na nchịkọta ọgụgụ isi, nyochaa na ịzi ezi na ndokwa.
Onye isi oche ahụ nyere iwu na Tọzdee n’oge nleta ya na Zamfara State, ebe ya na ndị ndú ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị isi ọdịnala, ndị okenye na ndị omempụ na-eme mpụ.
Maazi Femi Adesina, Onye Nnọchiteanya Ọkachamara kachasị na President na Media, kwuru na President: “N’ihe gbasara m, ụlọ ọrụ nche anyị edekọwo ụfọdụ ihe ịga nke ọma, mana ha kwesịrị ime ọtụtụ ihe.” ‘
“Ha agaghị emegbu onye ọ bụla, mana ha ga-ezukọta na iziga ọgụgụ isi na ịdọ aka ná ntị mgbe ihe na-aga ime, ‘” ka o kwuru.
Onyeisi ahụ jara ndị ọrụ nchebe mma maka iwepu omempụ egwu, “Buhari n’ozuzu”, onye gbanyela ọtụtụ afọ na igbu egbu na ihe onwunwe.
“Tupu” Buharin-daji “, onye na-akpọ onwe ya n’ozuzu ya, e nwere omempụ gburu ọtụtụ mmadụ na e gburu ya; “Buharin-daji” esoro ya na ndị ọzọ dị ka ha kwesịrị ịgbaso, “ka o kwukwara.
Onyeisi ahụ kwuru na egwu na egwu ndụ na ihe onwunwe ga-ebelata nnọọ mmekọrịta dị n’etiti ndị isi obodo, ụmụ amaala na ụlọ nche.
“Abiawo m ebe a iji soro gị kwurịta maka ọnwụ na ndụ. Anyị ga-anọgide na-eme ike anyị niile iji meziwanye ọnọdụ nchebe.
IHE NKIRI NDỊ NKIRI NOLLYWOOD NA-ABATA NA HOLLYWOOD
Otú ọ dị, ndị na-eme arụrụala na-anọnyere gị. A naghị akọ ụfọdụ n’ime ndị a n’ihi na ị tụkwasịghị nchebe nchebe, kama, ị na-akọghachi ndị omempụ ahụ. Anyị kwesịrị ibute nchebe ” ka o kwuru.
Ọ dọrọ aka ná ntị na agha ndị agha na-aga agha n’ihu na-akwado ma na-akwado ya, ndị na-emegbu ọnọdụ ha, na-eche ihu iwe nke iwu ahụ.
Ọ gwakwara ndị okenye na ndị ọchịchị ọdịnala na a ga-erepịa ihe ndị nchedo site n’aka ndị uwe ojii rụrụ arụ na-enyo enyo ga-ere, mgbe ha rụchara usoro ikpe.
Onye isi oche ahụ gwara ndị Niger ka ha jiri aka ha na-eme mgbanwe na mpaghara ugbo, na-ekwu na oge nke dabere na petrol ga-abịa na njedebe.
N’ihe ndi oru ozuzu ndi ozo, onye isi oche kwuru na odi mkpa ichogharia ma nyochaa ihe ndi ozo nke na-eme ka ndi mmadu na ndi na-azuru anu ndi mmadu kwadoro, ebe enwere nkwekorita anya site na iwu n’emeghi ihe ike.
N’okwu ya, Gọvanọ Yari, onye bụkwa onyeisi oche nke ndị gọvanọ Naijiria, kwuru na ọchịchị gọọmentị ejirila akụ ndị e bu ụzọ mee maka mmepe iji na-arụ ọrụ mpụ.
Gọọmenti ahụ, bụ onye jara mma nchebe maka ịrụ ọrụ iji chedo ala ahụ, rịọrọ ka gọọmentị Federal kwalite ego maka ọrụ, mekwuo ọnụ ọgụgụ nke ndị nche na-arụ ọrụ na steeti ma weghachite ala maka ego a na-etinye na ụfọdụ ọrụ gọọmenti Federal dị ka okporo ụzọ, nke o kwuru na ọ bụ ihe kacha mkpa na ndị omempụ na-alụ ọgụ.
N’akwụkwọ ya, odeakwụkwọ nke Gọọmentị State, Prof. Abdullahi Shinkafi, kwuru na steeti ahụ chere nnukwu nsogbu ndị omempụ kacha njọ dị iche iche nke ndị na-agba anụ ehi, ndị agha na-eme ihe ike na ịchụpụ ndị mmadụ na ịrịọ maka ịgba ọsọ ndụ.
Odeputara isi okpukpu asatọ nke isi, onye odeakwụkwọ nke Gọọmenti kwuru na ndụ mmadụ 1,321 furu efu kemgbe afọ 2011, ebe mmadụ 1,881 nọ na-enwe mmerụ dị iche iche site na mwakpo, na ihe dị ka ijeri biliyan iri abụọ na isii na-eji agha egwu.
Ndị ọchịchị ọdịnala, ndị okenye na ndị ndú nke obodo ndị metụtara ahụ rịọkwara gọọmenti ka ha hụ na nchebe ozugbo iji zọpụta ndụ.
hot HOTNEWS Isimbido ISIMBIDONEWS ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV news POLITICS